इतिहासमा ‘यदि’२००७ मा आन्दोलन नभएको भए... - Naya Patrika
इतिहासमा ‘यदि’२००७ मा आन्दोलन नभएको भए…
प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर | असोज २०, २०७४
५० वर्षअघि जतिवेला म स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्दै थिएँ । त्यतिवेला एउटा लेखको खुबै चर्चा भएको थियो । एकजना युरोपियन लेखकको उक्त लेख इतिहाससँग जोडिएको थियो । त्यसैले हामीलाई चासो हुनु स्वाभाविक थियो । उनको लेखको शीर्षक थियो, ‘इफ’ अर्थात् ‘यदि’ ।
इतिहासको कुनै एउटा घटना नघटेको भए के हुन्थ्यो ? उनको लेखको सन्दर्भ यही थियो । र, लेखमा त्यहीबारे चर्चा गरिएको थियो । ती लेखकले उक्त लेखचाहिँ नेपोलियनको जीवनीमा केन्द्रित गरेका थिए । फ्रान्सका शासक नेपोलियन बोनापार्टले आधा संसार जिते । हुन त, उनलाई एकपटक कैद गरियो । उनी कैदबाट भागे पनि । र, भागेपछि सैनिक संगठन बनाएर युद्ध गरे । त्यो युद्धलाई ‘ब्याटल अफ वाटर लु’ भनिन्छ । इतिहासकारको भनाइमा ‘ब्याटल अफ वाटर लु’मा नेपोलियनलाई भाग्यले साथ दिएन । भाग्यले साथ नदिँदा पराजित भए । त्यस युद्धबाट पराजित भएका नेपोलियनको एक वर्षपछि निधन भयो ।
यदि ‘ब्याटल अफ वाटर लु’को युद्धमा नेपोलियनलाई भाग्यले साथ दिएको भए, उनले युद्ध जितेको भए, युरोपको नक्सा कस्तो हुन्थ्यो ?
फ्रान्सको हैसियत के हुन्थ्यो भनेर ती लेखकले आफ्नो लेखमा व्याख्या गरेका थिए । र, लेखको चर्चा हुँदा इतिहास ‘यदि’ले चल्ने होइन भन्ने तर्क आयो, एउटा विचारधारा पक्षबाट । इतिहासले खासमा घटना घट्यो, त्यो किन घट्यो ? त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के हो ? भनेर उल्लेख गर्ने मात्रै हो । र, इतिहासमा कुनै घटना घट्छ भने त्यसको व्याख्या गर्ने हो । नघटेको घटनाको व्याख्या इतिहासले गर्दैन । यो विचारधाराका पक्षधरले इतिहासमा ‘यदि’को महत्व छैन भनेर व्याख्या गरे ।
त्यसैवेला अर्को विचारधारा पक्षले ‘घटना नघटेको भए यस्तो हुन्थ्यो भनेर वैकल्पिक धार चाहिन्छ’ भन्ने विचार राख्यो । इतिहास भनेको अतीतमा जे भयो त्यो भन्ने मात्र होइन, त्यसबाट भविष्यका लागि पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण आयो । त्यही दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर पछि अंग्रेज इतिहासकार ई.एस. कारले ‘ह्वाट इज हिस्ट्री’ भन्ने पुस्तक लेखेका छन् । उनले इतिहास भनेको एउटा राम्रो भविष्यका लागि अतीत र वर्तमानको कहिल्यै नटुट्ने संवाद हो, यसकारण अतीतबाट पाठ सिकेर वर्तमानमा ध्यान दिन सकियो भने सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्छ भनेका छन् ।
यही धारणा आउने कुरामा दुईवटा शब्दको विकास भयो । एउटा ‘हिस्ट्रोरिकल ट्रुथ’ अर्थात् ऐतिहासक सत्य र अर्को धारणाचाहिँ ट्रुथ हिस्ट्री’ अर्थात् सत्य इतिहास ।
नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा राणा शासन ढल्यो । त्यतिवेलाको वस्तुस्थिति, त्यतिवेलाका नेताको क्रियाकलाप, भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक, आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नेपाल अब यसरी अगाडि बढ्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसैलाई भनिन्छ, ऐतिहासिक सत्य । तर, ऐतिहासिक सत्यचाहिँ सत्य इतिहासमा परिणत हुन गाह्रो छ । ऐतिहासिक सत्य एउटा हुन्छ, तर घटनाक्रम अर्कै किसिमले अगाडि बढ्न सक्छ ।
इतिहासमा हामीले ऐतिहासिक सत्य होइन, सत्य इतिहासलाई मान्नुपर्छ । यी दुई फरक कुरा हुन् र फरक हुनुमा कारण हुन्छ, जस्तो वि.सं. २००७ सालमा त्यतिवेला नेताहरूको क्रियाकलाप, त्यतिवेलाको विश्व परिदृश्यले साथ नदिएको वा कुनै प्राकृतिक प्रकोपले प्रभाव पारेको हुन सक्छ । त्यसकारण ‘ऐतिहासिक सत्य’ ‘सत्य इतिहास’मा परिणत नहुन सक्छ । किन परिवर्तन भएन भनेर व्याख्याचाहिँ इतिहासकारहरूले गर्नुपर्छ ।
२००७ को आन्दोलन नभएको भए…
‘यदि’ इतिहासमा त्यो घटना नभइदिएको भए भन्ने सन्दर्भ जोडेर हेर्दा नेपालको वि.सं. २००७ सालको आन्दोलन नभएको भए नेपाल कस्तो हुन्थ्यो होला ? यसको सन्दर्भमा व्याख्या गर्नुअघि त्यससँग जोडिएका सन्दर्भलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्मलाई एउटा कालखण्ड र वि.सं. २००७ साल यतालाई अर्को कालखण्डका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
२००७ सालअघि जसले शासन गरे पनि एकतन्त्रीय थियो । त्यसकारण नेपालको इतिहासमा २००७ साल ‘डिभाइडिङ लाइन’ हो । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो भलै आन्दोलनले राणाशासकसँग सम्झौता गर्‍यो । त्यतिवेला सम्झौता नगरी नहुने अवस्था थियो । किनभने नेपालको साँचो भारतीय नेता नेहरूको हातमा थियो । नेहरूले सम्झौता गर्न कांग्रेस र राणा दुवैलाई मनाए । त्यतिवेला लोकसभामा भनेका पनि थिए कि, ‘मेरो नेपाल नीति भनेको मध्यमार्गी हो । नेपाल अहिले पूर्ण जहानीयाँ शासनमा टिक्दैन र पूर्ण प्रजातन्त्र पनि चल्दैन । त्यसपछि बीचको बाटो मानिएको हो ।’
खासमा वि.सं. २००७ सालको सकारात्मक पक्ष भनेको दुई वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र संविधान बनाउने भन्ने शाही घोषणा थियो । त्यो सन्दर्भ आउनुमा भारतसँग जोडिएको छ । जस्तो, भारत वि.सं. २००३ सालमा स्वतन्त्र भयो र २००५ सालमा त्यहाँ संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेको थियो ।
संविधान निर्माणका वेला ब्रिटिस विज्ञलाई बोलाउने कुरा उठेको थियो । तर, सबै भारतीय विज्ञले अस्वीकार गरे । ब्रिटिसबाट बल्ल उम्केका वेला त्यहीँबाट विज्ञ बोलाउँदा उनीहरूले केही न केही शब्द राखेर हामीलाई उपनिवेश बनाइरहन्छन् भन्ने धारणा थियो । भारतीय आफैँले बनाए, त्यो ठूलो कुरा हो ।
नेपालमा पनि वि.सं. २००७ सालमै, भनेको समयभित्र (दुई वर्षभित्र) संविधानसभा निर्वाचन भएको र संविधान जारी गर्न पाइएको भए नेपालको अवस्था पूरै परिवर्तन हुने थियो ।
त्यतिवेला अहिलेको जस्तो जटिल राजनीतिक अवस्था थिएन । र हुने पनि थिएन । त्यतिवेला संविधान बनेको भए नेपालको इतिहासले अर्कै मोड लिने थियो, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि । त्यो नहुनुको कारण छ, त्यतिवेलाको ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेसले यसको बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ, मातृका र विपीको झगडाका कारण ।
ऐतिहासिक सत्य के हो भने, संविधानसभा निर्वाचन होला । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक संविधान जारी होला, अनि देश राम्रो होला । तर, सत्य इतिहासचाहिँ राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो ।
राजनीतिक अस्थिरताकै बीचमा त्रिभुवनको ४ वर्षसम्ममा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भन्ने नै मनसाय थियो । भारतका निर्वाचन आयुक्तलाई बोलाएर तालिम पनि दिइएको थियो । तर, महेन्द्रको उदयपछि सबै कुरा सकियो । मेरो बुझाइमा महेन्द्र प्रजातन्त्रवादी होइनन् । तर, राष्ट्रवादीचाहिँ हुन् । उनी नेपालमा राम्रो केही होस् भन्ने चाहन्थे । तर, खराब के भने, त्यो सबै काम आफ्नो नेतृत्वमा होस् भन्ने । यदि देशको राम्रो हुन्छ भने आफ्नो नेतृत्व नभए पनि हुन्छ भनेर सन्तोष मान्नुपर्नेमा त्यो भएन ।
महेन्द्रले त संविधानसभाको ‘स’ पनि उच्चारण गरेनन् । राजा भएपछि महेन्द्रले निर्वाचन गर्नुपर्छचाहिँ भने, तर संविधानसभा निर्वाचनको चाहिँ नाम नै लिएनन् । टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्री बनाएर उनीमार्फत संविधानसभाको विरोध गर्न लगाए । के.आई. सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाए । उनले त त्रिभुवनले गरेको संविधानसभा निर्वाचनको शाही घोषणा रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्ने हो भनेर नै बोले । खासमा यी दुईजनालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको उद्देश्य नै संविधानसभाको विरोध गर्न थियो ।
वि.सं. २००७ को आन्दोलन नभएको भए भन्ने कुरामा भारतको आन्दोलनलाई पनि लिनुपर्छ । वि.सं. २००३ सालमा भारतमा ब्रिटिसले छाड्नुपर्ने भयो । यदि भारतमा ब्रिटिस रहेको भए नेपालमा पनि राणा शासन रहन्थ्यो । दोस्रो कुरा, चीनमा वि.सं २००४ सालमा माओको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट शासन आयो । यही वेला अर्थात् वि.सं. २००४ सालमा पद्मशमशेरले नेपाललाई पहिलो संविधान दिएका थिए, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन ।
पद्मशमशेरले त्यो संविधान ब्रिटिस शासक चर्चिलको सल्लाहमा ल्याएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धको समयका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि हुन्, चर्चिल । त्यत्रो विश्वयुद्ध जितेका चर्चिल त्यसपछि लगत्तै भएको निर्वाचनमा भने पराजित भए । हो, यहीँनेर फरक आउँछ, ऐतिहासिक सत्य र सत्य इतिहास । चर्चिलले पद्मशमशेरलाई भने, ‘भारत स्वतन्त्र भइसक्यो, चीनमा पनि शासन फेरियो । यदि राम्रोसँग तिम्रो शासन अगाडि लैजाने हो भने केही राजनीतिक सुधार गर्नुपर्छ ।’
चर्चिलले त्यति भनेपछि वि.सं. २००४ सालको संविधान दिइएको हो । वि.सं. २००४ सालको संविधान लागू भएको भए नेपालमा कुनै पनि प्रकारको प्रजातन्त्र आउने थिएन । फरक कति भने संविधान आएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार गर्नुपर्ने थियो । त्यसभन्दा पहिला जे गरे पनि हुन्थ्यो । यदि त्यो संविधान नेपालमा लागू भएको भए राणाशासन केही वर्ष धकेलिन्थ्यो । भलै संविधान लागू गर्न नहुने पक्षमा लागे मोहनशमशेर । र, उनी पद्मशमशेरविरुद्ध लागेर प्रधानमन्त्री भए । मोहन शमशेरल कतिसम्म गरे भने भारतसँग असमान भन्ने गरिएको सन् १९५० को सन्धि पनि संविधान कार्यान्वयन नगर्ने र शासन टिकाउन गरेका थिए । तर, न शासन टिक्यो न संविधान आउनबाट रोकियो ।
प्रस्तुति : योगेश ढकाल